APHID ON THE LAVENDER: SIDA LOO ILAALIYO GEED KA SOO CAYAYAAN - GEEDKA ORCHARD
Aphid - mid ka mid ah cayayaanka ugu caansan ee geedaha beerta. Waxay u keentaa waxyeelo weyn dhirta, ilaa dhimashadooda. Maqaalkani waxa aanu eegaynaa sida aphids ee khatarta ku jira geedaha iyo sida loola tacaalayo karbaashkan.
Waa maxay khatarta loogu talagalay aphids plums
Sababtoo ah baahsanaanta cayayaanku, ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu u baahan yahay inuu ogaado sida aphid u egyahay tuwaalka iyo sida loola macaamilo. Xajmiga xayawaanku ma gaadhaan wax ka badan 2 mm, waxay yihiin madow, cagaaran, bunni, jaalle, casaan. Wakiilada qaarkood waxay leeyihiin baalal. Si dhakhso leh ayey u badiyaan. Hal haween ah ayaa soo saartey illaa 150 ilmo laba todobaad. Cayayaanka waxay ku hoos nool yihiin caleenta, burooyinkeeda. In dhirta ay saameeyeen, caleenta wuxuu noqdaa mid dhalaalaya, curls, burooyinkeeda iyo burooyinkeeda dhicid. Geedaha si xun bay u bloomaan oo waxay midho u dhali karaan.
Dhibbanaan ee aphids waa in kuwa lamid ah ku quudiyaan dheecaanka geedka iyo baabi'iyaan cagaarka oo dhan. Geedka wuxuu joojiyaa helitaanka qadarka nafaqada ee lagama maarmaanka ah ee ciidda, wiiqa, wuxuu noqonayaa mid nugul xaaladaha cimilada iyo cudurrada xun. Dalool, oo ay saameeyeen aphids, uma dulqaadanayo dhirta waxayna ku xakameyn kartaa hoos u dhac heerkul ah. Aphids waxay ka baxaan dheecaanka dhegaha ee dhirta oo ka hortagaya in geedku ka soo baxo oksijiinka. Soddiyeyaashu waxay sidoo kale abuuraan xaalado wanaagsan oo loogu talogalay infekshanka cudurka tubaakada leh ee fungal, taasoo keeni karta dhimashada geedka.
Ma taqaanaa? Aphid waxay leedahay qaar ka mid ah guryaha muhiimka ah. Waxay soo saartaa dharab macaan, oo u adeegta sida shinni ah ee soo saarista malab, iyo sidoo kale isha bacriminta nitrogen.
Sida loo takhaluso aphids ee plomme, hababka la xaqiijiyay
Markii hore cayayaanku waa la helaa, way fududahay in la dagaalamo. Intaa waxaa dheer, cayayaanka ka mid ah geed ayaa u guuri doona mid kale, burburinta dhammaan beerto ee degmadooda. Maanta, waxaa jira siyaabo badan, daroogo iyo isku darka isku dhafan ee loogu talagalay la dagaallanka aphids. Dhammaantood waxay haystaan ​​faa'iidadooda iyo khasaaradooda.
Markaad dooranayso qalab gaar ah waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto dhowr arrimood:
heerka cufnaanta beerashada beerta.
Iyadoo ku xiran qodobbada la tilmaamay, hababka soo socda ee cayayaanka ayaa loo isticmaalaa:
Waa muhiim! Roob - geedka ugu jecel ee aphids, iyo dagaalka ka dhanka ah waa mid aad u adag. Sidaa darteed, warshad waa in si joogto ah loo kontoroolaa joogitaanka cayayaanka.
Siyaabaha farsamaysan ee looga takhalusi karo aphids on tubta
Habka farsamaysan ee lagula dagaallamayo cayayaanka cayayaanku waxaa keliya loo isticmaalaa kiisaska geedku uu gaaray heer yar iyo mugga burburka warshadda by aphids waa yar yahay. Xaaladaha kale, waa wax aan fiicneyn. Habkani wuxuu si gaar ah ugu caansan yahay daaweynta geedo yar yar iyo geedo, iyo sidoo kale inta lagu jiro muddooyinka ah fruiting.
Haddii cayayaanka ay ku hareereysan yihiin tubta iyo meelaha ay dhibaatadu saameysey waxaa lagu tirin karaa faraha, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro caleemaha ay ku jiraan cayayaanka. Caleemooyinkani waxay u baahan yihiin in lagu soo ururiyo raso iyo gubasho. Haddii si fudud loo tuuro dhulka, cayayaanka ayaa si deg deg ah u heli doona haraaga cusub. Laga soo bilaabo aphids yar yar oo geed ayaa sidoo kale lagu maydhi karaa jet awood leh oo biyo ka soo hoos tuubo.
Sida loo wajaho aphids on kiimikada tubta
Daaweynta kiimikada waa mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan uguna dhaqsaha badan si looga takhaluso aphids on tubta. Markaa, si deg deg ah oo wax ku ool ah ayaad uga saari kartaa qoysaska ballaaran ee cayayaanka. Si kastaba ha ahaatee, habkani wuxuu ku lugleeyahay daaweynta geed leh maaddooyinka sunta ah, sidaa daraadeed waa in loo isticmaalaa oo kaliya marka ay dhacdo dhaawacyo waaweyn iyo si taxaddar leh, adoo raacaya dhamaan sharciyada badbaadada. Xilliga guga ee plomme laga bilaabo aphids bilaabmaa badhtamaha March. Daaweynta labaad waxaa la fuliyaa inta lagu guda jiro muddada budo formation, saddexaad - inta lagu jiro muuqaalka korniinka. Haddii cayayaanka ay soo weeraraan dhirta iyo shaqada kadib, buufinta ayaa mar kale la qaadaa.
Ma taqaanaa? Aphid inta lagu guda jiro dhammaan muddada horumarintu waxay badali kartaa midabkiisa dhawr jeer.
Ka feker waxaad ka qaban kartid tubta laga bilaabo xilliga guga. Daroogooyinka ugu waxtarka badan waxaa ka mid ah:
Daawooyinkaasi waa dib u eegis wanaagsan, ha ku dhicin bakteeriyada. Ku haboon isticmaalka badan. Dilida daroogada waa in si adag loo eegaa sida ku qoran tilmaamaha. Qalabka geedaha waxaa lagu sameeyaa buufinta. Xaaladdan, hubso inaad isticmaasho gacno gashi, faashad faashad ama maaskaro, oogada. Cuntada waxaa la sameeyaa hal ama bil iyo badh ka hor goosashada.
Isticmaalka diyaarinta nafleyda
Agabyada bayoolojiga ah isla markiiba ma saameeyaan cayayaanka. Kani waa ka yar yahay kan hore ee kiimikada oo macneheedu yahay maalinta labaad. Saamaynta bayoolojiga waxay qaadataa 5-10 maalmood. Si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin faa'iidooyin badan. Waxyaabaha bayoolojiga ah waxaa loo isticmaali karaa in laga saaro aphids on tubta ka dib ubax. Kiimikooyinka waxaa loo isticmaalaa oo keliya ilaa wejigan iyo maalmaha ugu horeeya ka dib marka ubax. Waxyaabaha bayoolojigu waa wax aan waxyeello u lahayn dadka, shinni, waxaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro xilliga jabka.
Waa muhiim! Miraha aan la cuni karin 2-3 maalmood gudahood ka dib marka lagu daaweeyo daawooyinka nafleyda.
Daawooyinka noolaha ee ugu waxtarka badan waxaa ka mid ah:
Waxyaabaha bayoolojiga ah ayaa lagu sameeyaa saldhig dabiici ah. Dabcan, way ka qaalisan yihiin kiimikooyinka, laakiin faa'iidadooda muhimka ah waxay tahay in ayan dad aan khatar u ahayn oo aysan u horseedi doonin in ay ku sumoobaan miraha.
Daawooyinka ugu wanaagsan ee dadku ka horjeeda aphids ee tubta
Marka laga soo tago iibsashada, waxaa jira tiro badan oo hababka caanka ah ee wax ka qabashada aphids. Habka aad u wax ku oolka ah waxaa loo tixgeliyaa habka loo yaqaan tincture plums ee caleemaha yaanyada. Si aad u diyaariso walaxda, caleemaha hoose ee yaanyo waa in la jarjarey oo la qooyay habeenkii. Markaas cadaadis, ku shub weelka iyo buufin. Aphids waxay ka cabsanayaan toonta. Waxaa lagama maarmaan ah in la qaato 4 xabo oo jarjaran. Ka dibna ku dar 20 g oo saliid ah, nus litir oo biyo ah iyo shaaha oo ah saabuunta dareeraha ah. Ka hor inta aan la samaynin isku dar ah waa in lagu qasi karaa biyo (2 qaado oo halkii 5 litir oo biyo ah). Dib u eegis wanaagsan ayaa sidoo kale ku raaxeysta tincture. Cabbirta madaxa ee basasha waa in la jarjarey, qoyi 5 saacadood oo biyo ah, ku dar 5 g saabuun. Isku dar ayaa diyaar ah. Soosaarista citrusku waxay wax badan ka qabtaa cuncunka. Si taas loo diyaariyo, 100 g oo ah diirka qalalan waxaa lagu shubaa litir biyo diirran oo lagu mudo saddex maalmood.
Ma taqaanaa? Si loola dagaallamo aphids si wax ku ool ah u isticmaal cabitaanka khamriga Coca Cola. Si aad tan u sameyso, qaado dhalada laba litir ah, ku rid buufinta iyo alwaaxa.
Sida looga hortago muuqaalka aphids ee ficilka ka hortagga
Aad bay u adag tahay in lala dagaallamo aphids, sidaa daraadeed waxay ka fiicantahay in laga hortago jirro ka badan intii laga takhalusi lahaa muddo dheer. Si looga hortago dhacdooyinka cayayaanka, ha dhaafin-bacriminta nitrogen si aad u ciidda. Bacaha ma jecla dhirta qaarkood (calendula, toon, basasha, chamomile). Geedka u dhow ee loo yaqaan 'planet', waxaad ka ilaalin kartaa geedka ka yaryar. Haddii aphids laga helo dhirta ku dhow xaabo, waxay ka fiican tahay in lagu daaweeyo tubta leh faleebo ama toon.
Waa muhiim! Aphid - daaweynta jecel ee quraanjada. Ha ku beeri geedka meel u dhaw kaniisada. Waxay ku wareejin doonaan cayayaanka warshadda.
Mid ka mid ah tallaabooyinka muhiimka ah ee ka hortagga ah waa nadiifinta nidaamsan ee haramaha ku wareegsan geedka. Quudinta ciidda qoryaha qoryaha ayaa kaa caawin doona ilaalinta dhirta ka soo duulista aphids. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay in la soo saaro caleemaha asalka, iyo dayrta si ay uga saarto qaybo burbur ah oo qallalan ee geed ka. Hadda waxaad taqaanaa sida loo ogaado wanka ku jira tuwaalka iyo sida loola dhaqmo. Waxa ugu wanaagsan in la sameeyo daaweyn ka hortag ah warshadda iyadoo la adeegsanayo habab dad ama kiimiko ah guga iyo dayrta si looga hortago faddarada geedka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geedka Orchard 2019